Rehefa mihabe isan-taona ny kaomandy isan-taona, tsy afaka mamaly ny filan'ny mpanjifanay ny fahafahanay milina voalohany. Noho izany, nanolotra milina fanodinana herinaratra roa izahay. Ireto masinina roa ireto dia namboarina manokana ho an'ny vokarinay. Gea no mitondra azy ireo ...
Tamin'ny 4 Jona 2021, ny mpitarika sy ny manampahaizana momba ny Birao Fanaraha-maso ny fiarovana ny governemanta dia nitsidika ny orinasanay mba hanao fitiliana fiarovana ny fitaovana famokarana sy ny toerana famokarana ny orinasanay. Noho ny lozam-pifamoivoizana azo antoka tato ho ato dia mitranga matetika. T ...
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny orinasam-barotra any ivelany tato ho ato dia niharan'ny tsy fahampiana matanjaka ny orinasanay tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona lasa. Ho setrin'ity toe-javatra ity dia nanisy fatana fandoroana hafahafa vaovao izahay tamin'ity taona ity. Ny fananganana o ...